Diiwaangelintu waxay ka bilaabmaysaa Red Bull Homerun 2020 | RayHaber | raillynews
[21 / 02 / 2020] Sirdoonka farshaxanka ayaa loo adeegsan doonaa mashruuca diyaaradaha dagaalka ee qaran	06 Ankara
[21 / 02 / 2020] Waxqabadka Wacyigelinta Caafimaadka ee Saldhigga Tareenka ee Afyonkarahisar	03 Afyonkarahisar
[21 / 02 / 2020] Saxeexyada KONYARAY Khadka Jaan-gooyada ayaa la saxeexay ..! Marka sidee wadadu noqon doontaa	42 Konya
[21 / 02 / 2020] Bayaanka ay wasaaraddu ka soo saartay shilka diyaaradda ee Sabiha Gökçen	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Banaadir14 BoluDiiwaangelinta Red Bull Homerun 2020 ayaa bilaabatay
17 / 01 / 2020 14 Bolu, 16 Bursa, 25 Erzurum Review, 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, Gobolka Banaadir, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
isdiiwaangelinta ayaa loo bilaabay dibi homerun cas
dhacdada sports jiilaalka ugu weyn ee sannadka Red Bull Homerun, Turkey ayaa isku diyaarinaya inay la wareegaan xarumaha ugu ski muhiim ah.
Sidee dhakhse u ordi kartaa? Sidee dhakhso leh ayaa loo tartami karaa? Hagaag, labada dhinac ma wada sameyn kartaan? xomeer Red Bull, afar ciyaaraha jiilaalka ee Turkey ku soo dhaca maskaxdooda yahay buurta Palandöken, Uludag, Kartalkaya iyo February 8th at Erciyes raadinaya jawaabta su'aalahan.
Marwalba diyaar ma u tahay inaad orodid oo aad la dhex gasho Red Bull? Bisha Febraayo, waxaa lagugu casuumay inaad ku raaxeysato buuraha oo aad la kulanto waayo-aragnimo Red Bull oo run ah.
Fikradda Red Bull Homerun waa mid sahlan: waxaad uga tagaysaa qalabka barafkaaga meel, waa inaad oroddaa laga bilaabo safka ilaa meeshaas oo aad xirataa qalabkaaga sida ugu dhaqsaha badan. Kadib, wuxuu tusi doonaa xirfadahiisa barafka ilaa layn dhameynta. Dhamaadka tartanka, waayo-aragnimo gebi ahaanba ka duwan ayaa adiga ku sugaya.
Macluumaad Muhiim ah oo loogu talagalay Red Bull Homerun
Red Bull Homerun waa hay'ad ka weyn da'da 18 waxayna u furan tahay marin-haadeyaasha iyo baraf-barafka dhammaan heerarka.
Dhammaan kaqeybgaleyaasha waxaa laga rabaa inay xiraan qalabka difaaca ee lagama maarmaanka u ah (koofiyad, goggle, galoofyada). Kaqeybgalayaasha aan haysan qalabkan ma awoodi doonaan inay ka qeybqaataan dhacdada.
Kaqeybgalayaasha laftooda ayaa mas'uul ka ah dhacdo kasta oo ku dhici doonta qalabka. Ururku ma aqbalayo mas'uuliyadda qalabka wax soo saarka.
Red Bull Homerun wuxuu ka kooban yahay 2 qeybood: barafka iyo barafka barafka.
Red Bull Homerun, abaalmarino ayaa lagu bixin doonaa 4 qaybood.
Red Find Homeron Si Aad Isaga Diiwaangeliso Riix halkan
Tirinta ayaa bilaabaneysa Maalinta Duulista Cas
Diiwaangelinta FIATA 2014 Istanbul waxay bilowday
Red Bull ayaa ku jiri doonta Erciyeste
Kumanaan 10 Istanbul ah oo Daawaday Dayactirka Gawaarida Xayawaanka ee loo yaqaan 'Red Bull Car Park Drift World Final'
Diiwaangelinta Toddobaadka Sky way sii socota
Ansixinta Mashruuca Birta Gawaarida ee Kastamonu ee Degmadda Kastamonu
Mashruuca Teleferic degmada Kastamonu ee Golaha Sare ee Monuments ına
Block of Monuments on mashruuca telefishinka ee Kudahya
Mashruuca gawaarida fiilada ee loo yaqaan 'cable cable' ayaa la qorsheeyay in lagu dhiso inta u dhexeysa Hisar iyo Hıdırlık ee K intahya…
Qolka Dawlada Hoose ee Kastamonu iyo Mashruuca Clock Tower Teleferic Yapım
Ogolaansho ka timid Guddiga Sare ee Dhagaxyada ee Degmada Kastamonu
Mashruuca Teleferic ee Kastamonu, Guddiga Dhaqanka ayaa siiyay oggolaanshihii ugu dambeeyay
Dibi cas homerun
Red Bull Homerun 2020 Diiwaannada
Fikradda Casaanka ah ee 'Red Bull'
TÜSİAD Waxaa ku jira dhalinyaro JOB ah! Xuska cusub ee Aegean wuxuu ka bilaabmayaa iskaashiga EGİAD!
Gegada Diyaaradaha ee Bursa Yenişehir waxay noqotaa Madaarka Cusbooneysiinta
Sirdoonka farshaxanka ayaa loo adeegsan doonaa mashruuca diyaaradaha dagaalka ee qaran
Waxqabadka Wacyigelinta Caafimaadka ee Saldhigga Tareenka ee Afyonkarahisar
Bayaanka ay wasaaraddu ka soo saartay shilka diyaaradda ee Sabiha Gökçen
BMW İstanbul Adeegyada Idman iyo Macluumaadka Xiriirka